BHZD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လေယာဉ်မှ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် မီးလုံး
1. ရေနံရှာဖွေရေး၊ ရေနံသန့်စင်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် အခြားနေရာများတွင် သတိပေးအချက်ပြမှုရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
2. အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၊ တူးဖော်သည့်ပလပ်ဖောင်းများ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများနှင့် အဆောက်အအုံရှိ အထပ်မြင့်ဆီသိုလှောင်ရုံများ၊ လေကြောင်းအတားအဆီးများအသုံးပြုမှုအတွက် ညွှန်ကြားချက်များ။
4. ပေါက်ကွဲသောလေထု- အတန်း ⅡA၊ⅡB၊ ⅡC;
6. မြင့်မားသောအကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များ၊ စိုစွတ်သောနေရာများအတွက်သင့်လျော်သည်။
1. အကာအရံအား စွမ်းအားမြင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းထားသည်။၎င်း၏ အပြင်ဘက်သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဖိအားမြင့်သော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပက်ဖြန်းထားသည်။အရံအတားတွင် အားသာချက်အချို့ရှိသည်- တင်းကျပ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆပစ္စည်းများ၊ ကြီးမားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ကောင်းမွန်သောပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ။၎င်းတွင် ပလတ်စတစ်အမှုန့်များ၏ ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှု နှင့် ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။အပြင်ပိုင်းသည် သန့်ရှင်းပြီး လှပသည်။
2. ပုံသွန်းလုပ်ခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လှပသောအသွင်အပြင်။
3. မြင့်မားသောတောက်ပမှု LED မီးလုံးကိုအသုံးပြုခြင်း၊ စားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း (နာရီ 100,000)၊ mianweihu လက္ခဏာ။
4. အလိုအလျောက် optic ထိန်းချုပ်ခလုတ်သည် ညအချိန်တွင် သို့မဟုတ် မြူထူထပ်သောအခြေအနေတွင် ဖွင့်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် နေ့အလင်းရောင်တွင် ပိတ်ပါသည်။
5. ၎င်းသည် မီးသီးကို အလိုအလျောက်ပြောင်းပေးသည်၊ စစ်ဆေးရေးချို့ယွင်းမှုနှင့် အချက်ပေးစနစ်တို့ကို အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးသည်၊ ဆဋ္ဌမမီးသီးအလုပ်လုပ်သောအခါ၊ သယ်ဆောင်သူလှိုင်းစနစ်သည် မီးသီးအသစ်ကိုပြောင်းရန်အတွက် အသံနှင့်အလင်းအချက်ပြအချက်ပြအချက်ပြမှုကို လွှတ်လိုက်မည်ဖြစ်သည်။
7. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ဆိုလာပြားများအတွက် ဆိုလာပြားများကို ယှဉ်နိုင်ပြီး၊ လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ အလင်းပြောင်းနိုင်ပြီး တောက်ပမှု 10lx အခြေအနေတွင် အားလုံးသည် ပုံမှန်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ YinYuTian ပင်လျှင် ပုံမှန်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်၊ ဤပန်းကန်ပြားကို တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။ နေရောင်ကာခရင်မ်မပါဘဲ၊ နေရောင်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ရန်၊ ပြုပြင်ပြီးစိတ်ချရသင့်သည်၊စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ဘက်ထရီများပါရှိသော ထိန်းချုပ်ဘောက်စ်၊ 12V / 0.7 Ah အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မမ်မိုရီ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများ တပ်ဆင်ထားပြီး၊ မီးချောင်းများနှင့် မီးအိမ်များ 15 နာရီအထက်အထိ ထွန်းထားပြီးနောက် နေ့ခင်းဘက်အလင်းရောင်တွင် အတားအဆီးအဖြစ် ပြောင်းလဲထားသော မီးချောင်းများကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောနေရာများတွင်အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်ကို အပြည့်အဝကျေနပ်စေသည်၊ တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် သက်သေပြထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာသုံးခုကို မှတ်သားပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အဆင့်ထားရှိပါ။
1. စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများ၏ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွေးချယ်ရန်နှင့် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံအမှတ်အသား တိုးမြှင့်ပြီးနောက် မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များတွင်၊ကွန်ကရစ်အသုံးအနှုန်းမှာ- "ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် - သတ်မှတ်ချက်ကုဒ် + ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံအမှတ်အသား + မှာယူမှုပမာဏ"။ဖုန်မှုန့်ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံနိုင်သောလေကြောင်းဖလက်ရှ်မီးများအတားအဆီးလိုအပ်မှု၊ မှာယူမှုအစုံ 20 အရေအတွက်၊ ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ- "မော်ဒယ်- BHZD + Specifications- Ex tD A21 IP66 T80 ℃။
IW5510 စီးရီး အိတ်ဆောင်အလင်း ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော...
Model Implication Features 1. အလုပ်လုပ်ချိန်သည် ရှည်လျားပြီး တောက်ပသော အလင်းရောင်နှင့် အလုပ်လုပ်ချိန် 10 နာရီ၊ 20 နာရီ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်သည့် အလင်းရောင်။2. အရံအကာအကွယ်အတန်း IP66၊ ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် မီးချောင်းများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန်။3. တင်သွင်းလာသော ကျည်ဆန်-ခံပလပ်စတစ်ပစ္စည်း၊ မြင့်မားသော အစွမ်းသတ္တိ၊ ထိခိုက်မှုဒဏ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် တင်သွင်းသည့် ကျည်ဆန်များကို အသုံးပြု၍ ခွံကို အသုံးပြုပါ။4. ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်၊ လက်ကိုင်၊ တွဲလောင်း၊ ခေါက်ဆွဲ နှင့် အခြားသော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြစ်ပြီး သံလိုက်စုပ်ယူမှုဖြင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။5. User-friendly batt...
BAD63-A စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်...
Model Implication Features 1. Aluminum Alloy Die Cast Shell, မျက်နှာပြင် electrostatic spray, လှပသော အသွင်အပြင်။2. အပေါက်တစ်ခုစီမှ ကင်းလွတ်သော အလင်းရင်းမြစ် ကာဗို၊ အလင်းရင်းမြစ် အပေါက်နှင့် ဝါယာကြိုး ၃ ခု၏ မူပိုင်ခွင့် ဒီဇိုင်း။3. borosilicate ဖန်အကြည် အဖုံး သို့မဟုတ် ပိုလီကာဗွန်နိတ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံးကို အသုံးပြုခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော။4. သံမဏိနှင့်ထိတွေ့ထားသောတွယ်ကပ်ကိရိယာများ၏မြင့်မားသောချေးခုခံ။5. ပွင့်လင်းသောအဖုံး...